I-Casa Tata 4 - I-Airbnb
I-Casa Tata 4
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguJose
Ezi khabhathi zintle zili-9 kanye phambi kolwandle yeyona ndawo ifanelekileyo ukuba ufuna ukonwabela iChacahua's Island enomtsalane wendalo kwaye usenendawo yokuhlala ecocekileyo, ezolileyo, enobunewunewu kunye nencasa.
Ifanelekile isibini, ukubaleka wedwa, okanye uhambo kunye nabahlobo bakho abasenyongweni ukuya kwezona ndawo zimangalisayo kuMzantsi Pasifiki weMexico.
Sikwisiqithi saseChacahua. I-Casa Tata ikwindawo ekude ngokwaneleyo ukusuka kwidolophu yaseChacahua ukuze ufumane uxolo lwengqondo elunxwemeni lwethu, uvuke kwangoko, ubaleke okanye wenze i-yoga uze wonwabele ukuphuma kwelanga okumnandi ongasoze ukubone.
Chitha usuku ufunda incwadi kwii-hammock zethu ezintle okanye usebenze kuloo projekthi ubuzibekela yona etafileni yakho yabucala ngaphandle kwendlu yakho yamaplanga.
Sisekufutshane kakhulu nedolophu yaseChacahua ukuze ukwazi ukuhamba ngephenyane, wonwabele ibhiya okanye i-mezcal kwibhari ethile, uye kuloba elwandle xa kuphuma ilanga okanye uhamba ngephenyane emanzini acocekileyo aseLaguna xa kutshona ilanga, uze ubuyele ekhaya kwindlu yakho yamaplanga entle embindini weChacahua.
Kwidinala ungaya kwivenkile yethu yokutyela esiyithandayo eChacahua ekwimizuzu nje embalwa uhamba elunxwemeni.